Riyadii Jannada Igaysay! Qalinkii: Sadam Osman Kaabash. | Allsomaliland
Riyadii Jannada Igaysay! Qalinkii: Sadam Osman Kaabash.
Wakhti gaaban kadib, waan arooray. Waxaan dhex istaagay arlo agaasiman, maamul iyo kale danbayn leh. Qurux iyo bilnaan leh
Waa xilli dhaxameed. Waxaa dhacaaaya dawro dhaaf. Dhammaan ummiyuhu yar iyo weyn, rag iyo haween gawsahay is qaniinsanyihiin si ay dardhada iyo kabuubyada dhaxanta isu dhaafiyaan. Anigu, waxaan goor habeennima ah huluushay qolkaygii degsiimada ii ahaa si aan dhaxanta uga waageerto. Si bilaa qaaba oon qummanayn ayaan sariirtii u jiifsaday. Cabbar oon qabaw aawadii is buurayey waan ka shubay. Goor ku dhowaada saqdii dhexee allaylkii ayaan soo baraarugay. Dhamman gogoshu waa qabaw, hawadu waa dharab da`aaya. Waxaan talo ku daystay in kaco oon digri, Alla bari, Quraan iyo salad alooso. Cago jiid dabadii, waxaan bilaabay wayso qaadasho. Salad dheer, ducaysi
xigtay iyo Quraan akhris gaaban ka dib waxaan anoo miyir la` dhaxan aawadeed dhinac u jiifsaday gogoshii.
Wakhti gaaban kadib, waan arooray. Waxaan dhex istaagay arlo agaasiman, maamul iyo kale danbayn leh. Qurux iyo bilnaan leh, cammiran oo deggan. Buuq, is dhexyaac iyo rabshad aan lahayn. Waxaa isoo jiidatay dhammaan qaybaha dhismayaasheeda iyo duulka ku dhexnool mood iyo nool ba. Waxa dhex shuban webiyo ha ahaato kuwo malaba oo midab xareediya leh, kuwa caana ah oo qulqulaaya sida il ka soo rogmatay buur qarkeed jirde gooye helay oon kale go` lahayn.
Midho iyo doog, beero isku hawray, khudaar macaan ishuna halacsanayso, cabbitaan hunguri mar leh, ilo rogmanaaya iyo hadhac maansheeyey , waa waxa ishuu qabanaysay. Sariiri giigsan. Beero lakabbo ah oo kale sarreya buuq iyo jaaqtoona aan lahayn, koobab dul iyo baar simman, roogag bilicsan oo safan, iyo barkimooyin tangiisan ayey dhaayahaygu qabanayeen.
Waxaa arladaas tubnaa oo bariido iyo soo dhowayn kal iyo laaba u joogay halkaas haween dherekoodu gaabni xigo, is wada le`eg, indho buurbuuran oo muuqoodu dhuubni iyo buurni mid toona ahayn. Ilkaha dhayda ah, sanqaroorka toosan, sunniyaha geergeeran, cirridka dhuxusha ah, dhexda madagta ah iyo naasaha gigtiran dhammaan tood way ka sinnaayeen. Waxayna ahayd abuur Alle oo sii horreeyey halkaasna negaadi ku ah duul soo socdana sooryo iyo soo dhowayn loogu asteeyey. Halkii sooryo bilan aan ka sugaaye daryaan iga ag baxay aawadii, waxaan ka toosay riyadii, hamaansi iyo u qaadan waa: naftu waxay igu kalliftay inaan ka fikiro waxaan arkay laakiinse nasiib darro waxay igu noqotay ”waxaanay il arag, dhegi maqal, qalbi aadamane aan ku soo dhicin”. Subxaanaka yaa cadiim!
Qalinkii: Sadam Osman Kaabash
Copyright © 2018 Allsomaliland.com ®All rights reserved.